Can Asians Think? (Full Text) – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Can Asians Think? (Full Text)
လူလူချင်းတကယ့်ကို ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ တန်းတူထားတဲ့ အနေအထားမျိုးဆိုတာကတော့ လူတစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့ သူ့ရဲ့မွေးဖွားကြီးပြင်းပုံ၊ အဆက်အသွယ်နဲ့ လူမျိုးရေး အခြေခံတွေကို ဂရုစိုက်နေစရာ မလိုဘဲ သူ့ရဲ့ပင်ကို အရည်အချင်း အစွမ်းအစတွေအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ရှင်သန်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ အပြည့်ရှိနေတဲ့ အနေအထားကို ခေါ်တာပါ။
“အာရှသားတွေ စဉ်းစားတတ်ကဲ့လား”ကို အပြည့်အစုံ ဖြည့်စွက်လိုက်ပါပြီ။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု ဆင်ခြင်တော်မူကြပါကုန်။
Author lettwebawPosted on 30 November 2009 30 November 2009 Categories Information
One thought on “Can Asians Think? (Full Text)”
Hpoe Thar says:
2 December 2009 at 9:54 pm
နဲနဲလောက်ပြောချင်တာလေးရှိလို့ပါ။ အာရှသားတွေဟာ အတွေးအခေါ်ပိုင်းအရဥရောပသားတွေထက်နောက်ကျတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပါတယ်။ ယနေ့ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ ဘာသာကြီးတွေဟာ အာရှမှာစတင်ခဲ့တာကတော့ချွင်းချက်ထားလိုက်ပါတော့။
ဥရောပက အာရှထက်သာလွန်တိုးတက်သွားရတဲ့အဓိကအချက်ကတော့ ၁၈ရာစုမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ကြောင်းကျိူးဆက်စပ်ပြီးစဉ်းစားတဲ့၊ ဘာသာရေးရဲ့လွမ်းမိုးကကင်းလွတ်တဲ့ စဉ်းစားတွေခေါ်မူကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်။ MPH ဆိုတာကတော့ အမြစ်ကနေတဆင့်ဖြစ်လာတဲ့ ပင်စည်၊ဒါမှမဟုက်ရင် အကိုင်းအခက်တွေလို့ပဲမြင်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်နေရင်မှားနေမှာစိုးလို့ မူရင်းစာအတိုင်းရေးလိုက်ပါတယ်။
The Enlightenment provided the cultural shift necessary for the final triumph of modernity. An historical moment of the eighteenth century, the Enlightenment refers to the emergence ofanew confidence in the power of human reason. The Enlightenment promoted the essentially secular view that by using reason, by thinking rationally, humans could, for the first time in human history, produce certain knowledge and could therefore harness this knowledge in the pursuit of progress.
Pg 26, Introducing Social Theory by Pip Jones
Previous Previous post: Can Asians Think? (Continued)
Next Next post: MPH: Another Mahbubani’s Thoughts